ADVENTO sy vaovao 29/11/2015 sy 06/12/2015 Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Toriteny Advento1 – Alahady 29/11 | flm-orleans.org
Vaovao avy eto an-toerana:
– Miarahaba ny Fiangonana manontolo nahatratra ny Alahady 1 amin’ny ADVENTO, taom-baovaon’ny Fiangonana. Fotoana izay ahatsiarovantsika ny fitahian’Andriamanitra nandritra ny taona lasa manontolo sy fotoana fanokafana ny fiandràsana ny Fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika.
– Mitohy ny Ezaka zava-maneno sy fanamafisam-peo, ary entanina isika rehetra mba handray anjara tandrify avy ny amin’izany. Ny valopy dia raisina isan’alahady any amin’ireo diakona eto an-toerana.
– Alahady 06 desambra 2015: Tsy misy Fiangonana isika, noho ny trano ampiasain’ny tompony, amin’io fotoana io. Afindra ny alahady manaraka, araka izany ny Absolosiona faobe nokasaina natao tamin’io. Tsy misy ihany koa ny Sekoly Alahady.
– Alahady 13 desambra 2015:
Handray ny absolosiona faobe isika eto amin’ny FLM Orléans. Asaina amin’izany na ny kely na ny lehibe. Entanina indrindra amin’ny fiomanana ara-panhy amin’izany.
Hotanterahana ny fifidianana isan-tsokajiny ho amin’ny fitantanan-draharaha mandritra ny efatra taona ho avy, izay hanasana ny mpandray ny fanasan’ny Tompo rehetra. Hisy fifidianana KOMITY ISAN-TSAMPANA, ary hisy koa fifidianana ireo izay ho mpikambana ao amin’ny KOMITIM-PIANGONANA.
Ny fotoana rehetra dia atrehina sy tarihin’ny Pastora amin’izany.
Mitondra am-bavaka izany rehetra izany isika tompoko ary miomana, hotarihin’ny Fanahy Masina.